Ikhabhoni yeCarbon VS. Fibreglass Tubing: Yeyiphi engcono?
ngomphathi ku 21-06-24
Ngaba uyawazi umahluko phakathi kwekhabhoni nefayibha yeglasi? Kwaye uyazi ukuba omnye ubhetele kunomnye? I-fiberglass ngokuqinisekileyo indala kwezi zinto zimbini. Yenziwe ngokunyibilikisa iglasi kwaye uyikhuphele phantsi koxinzelelo oluphezulu, emva koko udibanise imitya yeziphumo kunye ...
I-Carbon fiber ithatha indawo ye-aluminium kukwanda kwezicelo kwaye ibisenza njalo kule minyaka ingamashumi idlulileyo. Ezi fayibha ziyaziwa ngamandla abo ahlukileyo kunye nokuqina kwaye zikwanobunzima obukhulu. Imisonto yefayibha yeCarbon idityaniswe nentlaka eyahlukeneyo ukwenza iikhompawundi ...
Yenzelwa ntoni iityhubhu zecarbon fiber?
Iityhubhu zecarbon fiber Ityhubhu yolwakhiwo iluncedo kuluhlu olubanzi lwezicelo. Ke ngoko, ayimangalisi into yokuba iipropathi ezikhethekileyo zeetyhubhu zecarbon zibabeka kwimfuno ephezulu kumashishini amaninzi. Ngokuphindaphindiweyo kwezi ntsuku, iityhubhu zekhabhoni yentsimbi zithatha indawo yentsimbi, titanium, okanye ...
Iiparbon zeCarbon Fibre ezityiweyo zamanzi zilungele ukucoceka kweefestile
I-washer yeefestile yanamhlanje kunye necocekile inetekhnoloji ekhoyo kubo eyiminyaka engaphambi kwetekhnoloji ukusuka kwiminyaka elishumi eyadlulayo. Obu buchwephesha butsha busebenzisa ifayibha yekhabhoni kwiipali ezondliwe ngamanzi, kwaye oku kuye kwenza ukuba umsebenzi wokucoca ifestile ungabi lula kodwa ukhuseleke. Iipolisi zeFed Water zi ...
Sesiphi isixhobo esifunwa ngumcoci wefestile?
Ukucocwa kwefestile ayingomsebenzi oqhelekileyo kwakhona. Ngokwenene igcinelwe iingcali ezinezixhobo ezifanelekileyo kunye nezixhobo zokucoca nayiphi na iwindow. Nokuba ufuna ukucoca iifestile zekhaya lakho okanye ukuvula inkonzo yokucoceka kwefestile, kubalulekile ukuba wazi iimveliso eziyimfuneko kunye ne-equi ...